होटल बारमा आफैलाई खुलाउनुहोस्, दासीको फाइदा लिनुहोस्, र आफ्ना बच्चाहरूलाई लिएर आउनुहोस्!
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » होटल र रिसोर्ट समाचारहरू » होटल बारमा आफैलाई खुलाउनुहोस्, दासीको फाइदा लिनुहोस्, र आफ्ना बच्चाहरूलाई लिएर आउनुहोस्!
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • चीन ब्रेकिंग न्यूज • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • समाचार • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
तपाइँ यो होटल माया गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्थापन तपाइँ एक फरक अनुभव प्रदान गर्न चाहन्छ। यो तपाइँ पट्टी मा आफैलाई उजागर गर्न को लागी प्रोत्साहित गर्दछ। व्यभिचार स्वीकार गरिन्छ। होटल मा पनि धेरै कुशल नर्सहरु साँझ उपलब्ध छन् तपाइँको बच्चाहरु लाई तल राख्न को लागी। आखिर बेइजि in मा यो होटल परिवार मैत्री छ।
जब तपाइँ तपाइँको छुट्टी को अन्त्य मा हाम्रो होटल छोड्नुहुन्छ, तपाइँलाई कुनै आशा छैन! व्यभिचार प्रोत्साहित गरिन्छ।
कोभिडले यात्रा र पर्यटन परिवर्तन गर्यो, होटल र रिसोर्ट सहित, सम्पूर्ण आतिथ्य उद्योग सहित।
एक होटल बार मा एक सानो जोखिम को बारे मा। तपाइँको बच्चाहरु लाई ल्याउनुहोस् किनकि व्यभिचार ठीक छ। यो मात्र चीन मा सम्भव हुन सक्छ, वा यो अनुवाद मा हराएको थियो?
हामी सबैले विश्वभरि गर्दै आएको वर्षको साथ, कहिलेकाँही सोशल मिडियाले दिनको अन्तमा हामी सबैलाई आवश्यक पर्न सक्छ।
कोभिडले आतिथ्य उद्योग परिवर्तन गरेको छ। कसले भन्छ कि सोशल मिडिया वास्तव मा केहि पनी राम्रो छैन केहि बाहेक आफैंलाई कुनै तरिका, आकार, वा रूप मा बजार गर्न चाहने बाहेक?
यहाँ जान्छ ...
एक साथी हालै बेइजि went गएका थिए र होटेलले यो ब्रोशर दिएका थिए। यो बहुमूल्य छ। उनीले यो राखिछिन् र पढिरहेकी छे जब उनलाई राम्रो हाँस्न आवश्यक पर्दछ। स्पष्ट रूपमा, यो सीधा अनुवाद गरिएको छ, शब्दको लागि शब्द, मन्डारिनबाट अ to्ग्रेजीमा।
हाम्रो प्रतिनिधि तपाइँ एयरपोर्ट मा पर्खनु हुनेछ। होटल को लागी बस लेकशोर संगै चल्छ। चाँडै तपाइँ पानी पार गर्न को लागी खुशी महसुस गर्नुहुनेछ। तपाइँ थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाइँ होटल को नजिकै हुदै हुनुहुन्छ, किनकि तपाइँ बन्ड राउन्ड जानुहुन्छ। प्रबन्धक प्रवेश हल मा तपाइँ पर्खनेछ। ऊ सँधै सबै नयाँ पाहुनाहरुसंग सम्भोग गर्न कोशिस गर्छ।
यो पारिवारिक होटल हो, त्यस्तै बच्चाहरु धेरै स्वागत छ। हामी पक्कै सधैं व्यभिचार स्वीकार गर्न खुसी छौं। उच्च कुशल नर्सहरु तपाइँको बच्चाहरु लाई तल राख्न को लागी साँझ मा उपलब्ध छन्। पाहुनाहरुलाई पट्टी मा संयुग्मित गर्न को लागी आमन्त्रित गरीन्छ र आफैलाई अरुलाई उजागर गर्दछ। तर कृपया ध्यान दिनुहोस् कि महिलाहरुलाई पट्टी मा बच्चाहरु लाई अनुमति छैन। हामी सामाजिक खेलहरु संगठित गर्छौं, त्यसैले कुनै अतिथि कहिल्यै एक्लै छोड्न को लागी उनीहरु संग खेल्न को लागी।
हाम्रो मेनूहरू सावधानीपूर्वक साधारण र अनावश्यक छनौट गरिएको छ। डिनरमा, हाम्रो चौबाटो टेबलबाट टेबुलमा घुम्नेछ र तपाईंसँग फिडल।
प्रत्येक कोठामा तपाईको निजी भागहरूको लागि उत्कृष्ट सुविधाहरू छन्। जाडोमा, हरेक कोठा तातो छ। प्रत्येक कोठामा बल्कनी अश्लीलताको दृश्यहरू छन्। तपाईं यातायातको आवाजबाट व्याकुल हुनुहुने छैन किनकि होटेल र ताल बीचको सडक केवल पेडेरास्टहरू प्रयोग गर्दछ।
तपाईंको ओछ्यान स्थानीय परम्पराको अनुरूप बनेको छ। यदि तपाईंसँग कुनै अन्य विचारहरू छन् भने कृपया च्याम्बरमेडको लागि बज्नुहोस्। कृपया उनको फाइदा लिनुहोस्। उनी तपाईको शर्ट, ब्लाउज र अंडरवियर स्क्वाश गर्न धेरै खुसी हुनेछिन्। यदि सोधियो भने, उनले तपाइँको पँजालाई पनि पिट्नेछिन्।
जब तपाइँले तपाइँको छुट्टीको अन्तमा हामीलाई छोड्नुहुन्छ, तपाइँलाई कुनै आशा हुने छैन। तपाईं यसलाई भुल्न संघर्ष गर्नुहोस्।
त्यसो भए तपाई आफ्नो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ बेइजि to को यात्रा?